Ndụmọdụ Azụmaahịa 15 maka ịchụpụkwu Ahịa | Martech Zone
N'ahịa ahịa kachasị asọmpi taa, otu ihe doro anya: nyocha ị na-ere n'ịntanetị ga-agụnye usoro ịzụ ahịa mkpanaka, ma ọ bụghị ya, ị ga-efu ọtụtụ ihe!
Ọtụtụ mmadụ taa na-eri ekwentị ha, nke ka ukwuu n'ihi na ha na-ahụkarị usoro mgbasa ozi mgbasa ozi ha, ikike nke iso ndị ọzọ na-ekwurịta okwu ozugbo, yana kwa mkpa "ịnọrọ ọsọ" na ihe dị mkpa ma ọ bụ na-adịchaghị mkpa .
Dị ka Milly Marks, ọkachamara na Akwụkwọ nyocha EssayGeeks.co.uk na-atụ aro n'ụzọ doro anya, “Azụmahịa ndị a na-akwụ ụgwọ ijeri amatalarị mkpa ọ dị ịkwalite saịtị ha, ọdịnaya ha, atụmatụ azụmaahịa maka ndị ọrụ mkpanaka. Ekwenyere m na i kwesịrị ime otú ahụ, nanị iji jide n'aka na ị naghị ada n'azụ ebe a na-agba egwu n'ọma ahịa! ”
N’ezie, na post nke taa, anyị na --ekekọrịta iri na ise ị na - ahụ maka iji kwalite otito nke ahịa azụmahịa gị. Lezienụ anya ma tinye ha n'ọrụ.
Mee ka saịtị gị bụrụ enyi-enyi Nke a doro anya. Nzọụkwụ mbụ maka ire ekwentị bụ ịnweta weebụsaịtị nwere arụmọrụ na-egosipụta nke ọma na ihuenyo mkpanaka. Nwere ike ịchọta ọtụtụ n'ime isi mobile njikarịcha Atụmatụ edere n’isiokwu a.
Zụlite ọdịnaya kachasị maka ekwentị - Ihe kachasị mma na mkpanaka bụ naanị ọdịnaya nke dị mma na ekwentị. Dịka ọmụmaatụ, kama ịdebi ihe ederede, ị kwesịrị ịkewaa paragraf gị ma mee ka ahịrịokwu ndị ahụ dị mkpụmkpụ. Jiri akara ngosi ziri ezi ma hụ na ị na-enye ihe ngosi zuru ezu iji mee ka ndị ọrụ mkpanaka gị tinye aka.
Mụta ịkwalite ụdị gị site na iji Mgbasa Ozi Mobile - Netwọk mmekọrịta na-enye ndị mgbasa ozi uru dị ịtụnanya maka onye ọ bụla nwere obi ike ịnwale ya. Can nwere ike ibuli mkpọsa Facebook, Instagram, Google, Youtube, Snapchat dị ka o si masị gị, dabere na igwe mmadụ, ihu ekwentị, ebe, wdg. Nke a bụ ndu ndu na-eme atụmatụ dị irè mobile mkpọsa.
Jiri Google My Business iji Nweta Mpaghara - Ọ bụrụ na ị na-azụ ahịa mpaghara, ị ga-aka mma ịhapụ “Google My Business”. Ihe omume a na - ejikọ obere azụmaahịa gị dị n’ime netwọkụ Google, na - ebipụta nkọwa gị yana ebe ị nọ ntanetị, ma na - eduga ndị ahịa nwere mmasi ụzọ gị. Mgbe ọ bụla ndị ọrụ mkpanaka na-achọ nsonaazụ mpaghara ("ụlọ oriri na ọ bestụ bestụ kacha mma n'akụkụ m," "mgbatị n'akụkụ m," "uwe nke abụọ na Chicago"), Google nwere ike igosipụta azụmaahịa gị na wijetị gosipụtara (tupu nsonaazụ # 1. )
Gbaa ndi n’enye gi ume ka ha si na ebe ahia gi - Ọ bụrụ n’inwe azụmaahịa mpaghara, ịkwesịrị ịgba ndị ahịa gị na ndị ahịa gị ume ka ha lelee-eji ọrụ dịka Foursquare, Where, or Gowalla. Omume a dị mfe ga-eduga na mmata ọkwa dị mma.
Jiri nhazi nke enyi na enyi maka mgbasa ozi ịre ahịa Email - Y’oburu n’inwe ire ahia email, ikwesiri ilezi ozi ịntanetị gi maka ndi na - aguta ngwa. Iji mee ka ihe pere mpe, ikwesiri iji ndebiri email nke emegoro ya na ahụmịhe onye ọrụ mkpanaka. N'aka nke ọzọ, ị kwesịrị ịmụ etu esi edozi ederede gị na nke visuals na ọnọdụ gị (nke gbanwere ozi ịntanetị gị ka ọ bụrụ ibe ị na-anabata).
Gbalịa ire ahịa SMS / MMS - Ọtụtụ ndị na-ere ahịa na-atụ egwu ụkpụrụ nke ahịa SMS / MMS. Ka m gwa gị na ọtụtụ akụkọ bụ akụkọ ifo. Enwere ụlọ ọrụ ndị enyere aka nke nwere ike inyere gị aka ịkpọsa ngwaahịa / ọrụ gị nye ọtụtụ puku ndị ahịa nwere mmasị. N'ezie, mmekọrịta ahụ na-eme site na SMS ma ọ bụ MMS.
Ghọta Nzube Ndị Ọrụ Gị - Chee echiche banyere ihe ezigbo onye ahịa gị ga-achọ ịchọpụta ma ọ ga-eji ekwentị gaa na saịtị gị. Chebe ebumnuche ahụ wee nwaa ya oge ole na ole (n'iji nyocha). Site na nsuso na-agbanwe agbanwe, ị ga-achọpụta ihe ibe akwụkwọ mkpanaka gị kwesịrị ịgbagharị.
Gbaa akaebe - Nnọọ ole na ole ndị ahịa ga na-eche “Hey, M ga-ahapụ ebe a / saịtị a nyochaa.” Ee e, ha na-azụ ahịa nke aka ha, yabụ ị ga-egbochi ha ma rịọ maka nzaghachi ozugbo (ọ bụrụ na ịchọrọ ya). Nwere ike ime ya site na mmapụta, ozi dị ndụ, ma ọ bụ site na email. Jide n'aka na ị mepụtara ụdị edozi na ụdị dị mfe maka mkpanaka, yana nyocha gị ma ọ bụ ajụjụ gị anaghị achọ oge dị ukwuu. Ọ bụ ezie na ọtụtụ ndị mmadụ na-ebu ekwentị ha, ọnụọgụ ole na ole ga-etinye aka n'ihe karịrị nkeji 5 nke nyocha.
Nye ngwa ngwa site na QR Codes - Kaywa bụ ikpo okwu na-enyere gị aka ịmepụta ma hazie koodu QR maka azụmahịa gị. Koodu ndị a na-echekwa ọtụtụ ozi (naanị) ma nye ndị ahịa gị aka ịmepụta azụmahịa ngwa ngwa & nchekwa karịa site n'enyemaka nke ngwaọrụ mkpanaka ha.
Mepụta ngwa ekwentị gị - Nwere ike ime ka azụmaahịa gị na-aga nke ọma site na ịmepụta ngwa ngwa bara uru nke nwere ike ijere ndị ahịa gị na ndị ahịa gị n'ọdịnihu mbọ ịnwale ngwaahịa na ọrụ gị. Iji maa atụ, Uber enweghị ike ịme ya na enweghị ngwa. Ọ bụrụ n’ịchọghị ngwà, egbula inyefu mmefu ego gị!
Sochie Àgwà Onye Ọrụ Gị - Enwere ike nweta nnukwu ahụmịhe ekwentị naanị mgbe emechara nyocha na nyocha dị mkpa. Enwere ọtụtụ ngwa nyocha eji agagharị agagharị n’ebe ahụ, yabụ gbaa mbọ hụ na ị maara ụfọdụ n’ime ha. Ozugbo ịchọtara azịza kachasị mma maka azụmahịa gị, na-enyocha nsonaazụ gị mgbe niile ma attentionaa ntị na ihe na-arụ ọrụ ma chefuo ihe na-adịghị arụ ọrụ.
Jiri otutu ụdị Mgbasa Ozi Mgbasa Ozi - Dị ka o kwesịrị, ị kwesịrị ịgbalịsi ike inwe nguzozi mgbe ị na-ede ọdịnaya. Gbanwee ya - mepụta ederede blog, vidiyo, pọdkastị, infographics, ndịna-emeputa, na ihe ọ bụla ị kwenyere na ndị ahịa gị nwere ike inwe ekele maka ya. Etinyela otu ụdị ọdịnaya naanị - ndị mmadụ nwere ekele maka ụdị dị iche iche, yabụ gbaa mbọ nye ha ya.
Elegharala okporo ụzọ PC anya - Mbugharị ekwentị dị ezigbo mkpa n'oge a. Agbanyeghị, ị kwesịrị icheta na ndị ọrụ desktọọpụ nwekwara ike ịbụ ndị ahịa, n'ihi ya ị kwesịrị ịgbalịsi ike inwe nguzozi n'etiti njikarịcha. Ọzọkwa, buru n'uche na ndị ọrụ mkpanaka na-akọwapụta nke ọma mgbe ha na-achọ ebe ndị ọrụ desktọọpụ nwere ike iwepụta oge iji chọọ isiokwu sara mbara nke ga-enyere ha aka imebi ọchụchọ ahụ.
Gbaa ndi njem gi ume ka ha banye - Nye ndị ọrụ gị ohere ịkekọrịta na ịza ajụjụ na post gị, n'agbanyeghị agbanyeghị. Sitedị saịtị ekwentị gị kwesịrị ịkọwa bọtịnụ "Ekekọrịta" ma ọ bụ "Soro" nke dabara na ọwa mmekọrịta mmadụ na azụmahịa gị dị.
Ahịa Ndụmọdụ Ahịa Mobile
Were ndị a echiche na-eji ha na amamihe gị mobile njikarịcha mgbalị. Echefula ime ihe, ma ọ bụ ihe ọzọ, oge a ị nọrọ na-agụ post a ga-abaghị uru!
Tags: nbanye azụmahịanbanyegoogle azụmahịa mmpaghara mobileMMSmobile mgbasa ozimgbasa ozi mgbasa ozimobile enyi na enyiahịa efuAtụmatụ ịzụ ahịa ekwentịmobile kachasịmobile kachasị ọdịnayaemail-enyi na enyiNhazi nke enyi na enyiSMStestimonialsederede ederedeonye ọrụ nzube
Chris bụ onye nta akụkọ, onye editọ na blọgụ. Ọ na-enwe mmasị ide ihe na ime njem, na-achọta mmụọ nsọ ya n'ime ihe ọhụrụ, ihe okike.